Pet Paw Nail Clipeer Vagadziri & Vanopa | China Pet Paw Chipikiri Chipikiri Clipeer Fekitori
Pet Nail Faira iri yakachengeteka uye nyore inowana inotsvedzerera yakapera chipikiri neiyo Diamond pamucheto. Makristani madiki akasunganidzwa mune nickel anokurumidza kufaira zvipikiri zvechipfuwo. Iyo peturu chipikiri faira mubhedha wakakwenenzverwa kuti ukwane nzara.
Iyo pet chipikiri faira ine yakasununguka mubato uye isina-kutsemuka kubata.
Pet Nail Faira iri yakachengeteka uye nyore inowana inotsvedzerera yakapera chipikiri neiyo Diamond pamucheto. Makristani madiki akadzika mune nickel anokurumidza kufaira pet'zvipikiri. Iyo peturu chipikiri faira mubhedha wakakwenenzverwa kuti ukwane nzara.